Isifo sikashukela kanye ne-ryazhenka > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Kefir Glycemic Index
Abantu abanesifo sikashukela kufanele baziphike ngokwabo ukudla okuningi okumnandi okuthinta impilo yakhe. Kuyo yonke impilo yakhe kufanele alandele ukudla okuqinile. Kunezimo ezivame ukwenzeka lapho isiguli simthambekele kakhulu kuye, ngaphandle kwaleyo mikhiqizo engasongeli. Lokhu kufaka ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Isiphuzo sobisi oluhlaza: ukwakheka nezakhiwo
Imikhiqizo eminingi ehlukahlukene yenziwa ngobisi, ubisi olunoshukela lubhekwa njengelusizo kakhulu. Enye yezintandokazi ezithandwayo, enempilo futhi emnandi ubisi olubilisiwe olubilisiwe. Lesi isiphuzo esigaxa esinambitheka emnandi, ukuthungwa okubucayi, kufana kakhulu ne-yogurt.
IRyazhenka yavela ngekhulu le-17 futhi kusukela lapho isaqhubeka aziwa kabanzi. Ngendlela yakudala, ukuze kutholwe ubisi oluvuthiwe, ubisi lwaluqale lubiliswe amahora amaningi kuhhavini, bese luvunyelwa ukuthi luphole kancane, luthole ngo-ukhilimu omuncu futhi lunikezwe isikhathi “sokuvuthwa” ukuze isiphuzo siqiniswe futhi sithole ukunambitheka okumnandi okumuncu.
Namuhla, yonke into ilula kakhulu: banezela inhlama ekhethekile ethengiwe kwinethiwekhi yokuthengisa kubisi olubhakwe, uyixube, bese kuthi ngemuva kwamahora ambalwa, ubisi olubilisiwe olubilisiwe selulungele ukusetshenziswa.
Lo mkhiqizo ungenwa kalula ngumzimba, ngenxa yezakhiwo ezikuyo emikhiqizweni yobisi ebilisiwe. Isisekelo se-ryazhenka singaba siphelele, sinwebu noma senziwe kabusha ubisi.
Uqukethe uhla olukhulu lwamavithamini abalulekile: A, B1, B2, C, E, PP, iqembu lezakhi eziwusizo: i-potassium, i-sodium, ifosforasi, i-calcium, kanye nama-carbohydrate, amaprotheni, amafutha, ama-acid asemhlabeni kanye nasema-saturated acid. Lokhu kuhlanganiswa kwezakhi ezisizayo zesiphuzo kubangelwa ukuhwamuka okuphezulu koketshezi ngenxa yokwelashwa okushisa okuhlala isikhathi eside.
Ukuba khona kwamaprotheni kunomthelela ku-digestibility elula. Ubisi olubilisiwe olubunjiwe luhle ohlelweni lokugaya ukudla. Isetshenziswa ngempumelelo njengokudla okwelapha izingane, iziguli ezihlobene nobudala kanye neziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus.
Izakhi kanye nama-amino acid aqukethe kulesi siphuzo amunzwa ngangokunokwenzeka, futhi ngesivinini esikhulu.
I-calcium ne phosphorus kukhuthaza ukuqiniswa kwamazinyo namathambo, okubaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Amagciwane obisi lwe-Sour alawula kahle umgudu wokugaya ukudla, amelana kahle nokuvela kwe-dysbiosis, ungavumeli ukuqunjelwa.
Yikuphi i-ryazhenka ewusizo ngokwengeziwe?
U-Kohl, sibheka ubisi olubilisiwe olubisiwe njengengxenye yokondleka kwezokwelapha, ikakhulukazi uma kunesifo esibi kangako njengesifo sikashukela, kubalulekile ukuthola ukuthi yiziphi izindlela zakhe zokulungiselela ezamukelekayo. Kunezindlela ezi-2 zezimboni:
Idamu. Izithako zihlanganiswa esitsheni esikhulu, zishiywe zivuthwe, bese zihlanganiswa futhi zingafakwa emigqonyeni.
Okwelapha Ubisi olubhakwe luhlanganiswa ne-sourdough, luchithelwe masinyane emaphaketheni akhethekile bese lithunyelwa ukuvuthwa kuhhavini olukhethekile.
Ukwahlulela ikhwalithi, encike ngqo ebangeni lokulondolozwa kwezinto ezikhona zokulandela umkhondo nezinye izakhi, indlela ye-thermostatic ifanele. Kusondele kakhulu ekuthini iresiphi esetshenziswa ekhaya. Indlela efanayo yayilungiselelwe i-ryazhenka, okhokho bethu bahlupheka isikhathi eside kuhhavini waseRussia. Uma usebenzisa indlela yesibili, isiphuzo siba sikhulu, awukwazi ukusiphuza, kepha yidla ngesipuni.
Izici zokuchayeka emzimbeni
Iziguli ezinesifo "ushukela" esingalapheki ziyaphoqelelwa ukuthi zinamathele ekudleni okuqinile impilo yazo yonke, okuyisimo esiyinhloko sempilo ejwayelekile. Uhlu lwemikhiqizo yokudla olunenkomba ehambelana ne-glycemic index (GI) ifaka ubisi olubilisiwe olubilisiwe, olungenamiphumela eyonakalisayo empilweni futhi alikhulisi ushukela ophakeme egazini.
Uma sicabangela iqiniso lokuthi okuqukethwe kwekhalori kwesiphuzo okukhulunywa ngakho kungu-69 kcal nge-100 g yomkhiqizo, kuyamukeleka impela kushukela.
Kungani i-ryazhenka ilusizo kangaka uma isifo “simnandi” sizocaca uma sinaka ukuthi kuqeda indlala ehlaselwa yisifo sikashukela. Kwanele ukuphuza uhhafu wengilazi yesiphuzo ukuthola impumuzo esheshayo kanye nesimo sokugcwala.
Kuyaziwa ukuthi abantu abanesifo sikashukela bathola umuzwa ongenakuphikwa wokoma. IRyazhenka izosiza ukuyiqothula ngaphandle kokuthatha uketshezi oluningi. Ngasikhathi sinye, umuntu uzozizwa egcwele, futhi ngeke esazihlupha ngesifiso sokuphuza. Ngakho-ke, isisu ngeke sigcwaliswe kakhulu, futhi asikho isizathu sokwakhiwa kwe-puffiness, okujwayelekile kwabanesifo sikashukela abasebenzisa amanzi amaningi.
Futhi kule vidiyo kunemininingwane eningilizayo mayelana nezinzuzo zemikhiqizo yobisi, kufaka nobisi olubilisiwe olubisiwe, ezigulini ezinesifo sikashukela.
Inkomba ye-Glycemic kanye nomthwalo we-glycemic we-ryazhenka
Ukuze udwebe uhlelo olululo lokudla okunempilo, kubalulekile ukuqonda ukuthi yini umqondo we "glycemic index". Lesi sikhombisi sikhombisa izinga lokuqhekeka kashukela emkhiqizweni othathisiwe uma kuqhathaniswa nezinga lokuqhekeka kwe-glucose, okuyi-GI yamayunithi ayi-100, eqashelwa njengezinga lokuthola isilinganiso sokutholwa.
Ngamanye amagama, inkomba ye-glycemic yomkhiqizo wobisi obilisiwe ikhombisa ukuthi ngokushesha kangakanani izinga likashukela ngemuva kokusetshenziswa kwalo. Njengoba wazi, ushukela ungumphakeli ophambili wamandla abalulekile. Kepha ngesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukulawula le nkomba ukuze ungasifaki lesi simo.
Ngokungeziwe kokulawula isilinganiso sokuguqulwa komkhiqizo ushukela, kubalulekile ngokulinganayo ukuqapha ukuthi yiliphi izinga inkomba enkulu yesifo sikashukela lifinyelela. Ukuze uthole lokhu, kubalulekile ukunquma umthwalo we-glycemic (GN) womkhiqizo.
Umnyombo we-GN ulele hhayi kuphela esilinganisweni sokuguqulwa kwe-glucose, kodwa futhi nenani lama-carbohydrate. Lesi sikhombisi siyadingeka ukubala isikhathi isikhathi umzimba ongaletha ushukela esijwayelekile ngemuva kokuba sifinyelele phezulu.
Akufanele uzame ukuthola irayisi yobisi olubilisiwe ngokwakho, ngoba lokhu sisebenzisa indlela yokubala kanye nezibalo zezibalo ezingenziwa ongoti kuphela. Kwanele ukuholwa itafula eliphelile. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthola ulwazi olunembe ngokwengeziwe, kuyalulekwa ukusebenzisa umthombo wezifundo. Lesi sincomo singenxa yokuthi kumasayithi ahlukahlukene ungathola ukungafani kwezinye izinkomba. Lokhu kungafani kuchazwa ngokuhlangana kwenani le-GI, ngoba kuya ngezizathu eziningi:
umkhiqizo ugcinwa ngaphansi kwaziphi izimo,
imininingwane yezindlela zokupheka,
inqubo yokucwaninga elebhu.
Kodwa-ke, amayunithi angama-30-50 abhekwa njengesibonakaliso esifanelekile nesinembe kunazo zonke sobisi olubilisiwe.
Ungasisebenzisa kanjani isiphuzo sobisi esimuncu?
Ukudla okulinganiselayo yisimo esiyinhloko sabantu abahlushwa uhlobo 1 noma 2 lwesifo sikashukela. Ukudla kwesiguli okunesifo "sikashukela" kufanele kufake imikhiqizo yobisi ebilisiwe, kubandakanya nobisi olubilisiwe olubilisiwe. Kufanele isetshenziswe kucatshangelwa okujwayelekile kwansuku zonke, futhi futhi wazi ngokuhlangana okuvumelekile neminye imikhiqizo.
I-Ryazhenka ingaba isidlo esiphelele sebhulakufesi noma isidlo sakusihlwa, futhi singasetshenziselwa ukudla okulula, okukhonjiswa kwiziguli ezinesifo sikashukela. Ukudla ukudla okwenziwe ngobisi olubunjiwe ngezithelo kanye nama-berry supplements wamukelekile. Isiphuzo se-smoothie esuselwa ekuhlanganiseni izithelo ezichotshoziwe kanye namajikijolo nesiphuzo sobisi obilisiwe sithandwa kakhulu Kuyiqiniso leli elinomphumela omuhle emzimbeni ogulayo: isithelo esincane, sinciphisa inkomba ye-glycemic yomkhiqizo.
Akunzima ukulungiselela isiphuzo esinempilo, kwanele ukuthatha ubisi olubilisiwe olubhakwe njengesisekelo futhi ungeze izithako ezivela kuzithelo ezinjalo namajikijolo, afakwa nge-blender noma nge-mixer:
Ngezinhlobonhlobo nezinani elingeziwe, ubisi olubilisiwe olubunjiwe lungabuye luhlanganiswe nama-turnips noma iklabishi.
Esitsheni ukunambitha futhi ucabangele okuthandayo komuntu engeza isinamoni, uhhafu wesipuni uju, u-balm, u-xylitol. Uma isiphuzo silungiselela isidlo sakusihlwa, kufanele sidliwe amahora angama-1.5-2 ngaphambi kokulala.
Kuzo zonke izinhlobo zesifo sikashukela, kanye nesifo sikashukela soku gestational, kuyasiza ukusebenzisa ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Ngesifo sohlobo 1 odokotela bangeluleka ukuthi uphuze ubisi olubilisiwe olungabhakiwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-2-3 ngesonto, ngaphandle kwalokho, ungakhohlwa ngokulungiswa kwe-insulin.
Ngohlobo 2 sikashukela, ikakhulukazi uma isiguli sikhuluphele kakhulu, kunconywa ukuthi uphuze kuphela ubisi olubilisiwe olubisiwe ngamaphesenti aphansi wokuqukethwe kwamafutha (kungabi ngaphezu kuka-2,5%) amahlandla ama-3-4 ezinsukwini eziyi-7. Izinga lansuku zonke akufanele lidlule ku-200 ml.
Izindlela zokupheka ezenzelwe iRyazhenka
Isiphuzo nesinamoni. Hlanganisa izakhi: 250 ml wobisi olubilisiwe olubisiwe, ama-3 ama-PC. ama-prunes, isipuni esingu-1 se-oatmeal noma i-bran, uhhafu wezipuni zesinamoni. Vumela ihambisane imizuzu engama-30, futhi ingadliwa ngezingcezu ezincane.
Buckwheat ngezithasiselo ezimnandi. Wagewheat okuhlanzwa (100 g) uthele ama-500 ml we-kefir enamafutha aphansi, engeza u-200 ml wobisi olubilisiwe olubilisiwe. Ubusuku bonke thumela esiqandisini. Isitsha esihlukaniswe izingxenye ezi-5 sidliwa kancane kancane phakathi nosuku.
Iphalishi eliwusizo. Bilisa i-buckwheat, engeza iklabishi elihanjisiwe kulo, u hlanganise, inkathi nobisi olubilisiwe olubunjiwe, futhi isidlo esimnandi sesilungile. Thatha izakhi zesitsha ngokulingana okulingana, ekugcineni kufanele kube ngu-300-350 g.
Akunzima ukuqinisekisa usizo lwe-ryazhenka, kepha lo mkhiqizo une-contraindication ngokudla nezifo eziningana. Ubisi olubilisiwe olubhakwe kufanele lungafakwa kuphela ngokukhuluphala, izinkinga nge-digestibility yeprotheni yobisi lwenkomo, izinga eliphakeme le-acidity kanye ne-peptic ulcer. Uma zonke lezi zinto zitholakala esigulini esinesifo sikashukela, kufanele futhi singalethi lo mkhiqizo wobisi ekudleni.
Uma umuntu engenazo izinkinga ezibalwe ngenhla, isiphuzo sizoletha izinzuzo ezingabazeki, ukuphela komkhawulo yinani lokuhanjiswa kwansuku zonke. Udokotela ohambelayo kuphela onganquma ngokuqondile ngamunye ukuthi mangakhi amagremu e-ryazhenka nokuthi angaqedwa kangaki isiguli esithile.
Kuhle ukukhumbula ukuthi lo mkhiqizo ungama-khalori aphezulu, ngenxa yalokho, angadala isisindo somzimba ngokweqile ngisho nakumuntu ophilile. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukunamathela ezindinganisweni zansuku zonke ezisungulwe ngudokotela.
Ukunaka usuku lokuphelelwa yisikhathi, unganquma okuqukethwe okulondoloziwe okukuwo, okungathinti umzimba ngendlela enhle. Kuyalulekwa ukuthi isikhathi asidluli izinsuku eziyi-5. Enye i-caveat: kungcono ukuthenga umkhiqizo ngosuku wokukhishwa kwawo. Kufanele iqukethe izithako ezimbili: i-sourdough nobisi olubhakwe.
Uma isiphuzo siminyene, ngombala wekhilimu obucayi, lokhu kukhombisa ikhwalithi ephezulu. Kodwa noma kunjalo, inketho ekahle ibisi eyenziwe ngebhisi eyenziwe eyenziwe ekhaya, icubungula ubuchwepheshe obulungile.
Yidla ubisi olubilisiwe olubhakwe kuphela kungaba musha. Isiphuzo esiphelelwe yisikhathi singavusa ipheshana lesisu.
I-Ryazhenka ingumkhiqizo obisi obilisiwe othandwa yizigidi zabantu. Lesi siphuzo esimnandi siyasebenziseka nakulesi sifo esiyingozi njengesifo sikashukela. Into esemqoka ukubonana nodokotela ngesikhathi bese uthola izincomo kuye ngesingeniso esifanele sobisi olubilisiwe olubisiwe ekudleni kwansuku zonke.
Ngaphambi kokuthi uqale uthole ukuthi iyiphi inkomba ye-glycemic ye-kefir ephansi, njengazo zonke ezinye izinhlobo zalo mkhiqizo obisi obilisiwe, kufanele uthole ukuthi iyini le nkomba.
Namuhla, kuqondwa njengesinkomba esikhombisa ukuthi umkhiqizo owudliwayo womuntu uyakwazi ukwandisa ushukela wegazi. Kungakho kwabanesifo sikashukela okufanele bahlole le paramende ngokucophelela, kubaluleke kakhulu ukuyazi.
Kodwa-ke, ngaphezu kwalokhu, i-GI manje isetshenziswa ngenkuthalo ekwenziweni kokudla okusebenzayo kokunciphisa umzimba. Kwatholakala ukuthi ukudla okunezinga eliphakeme ama-carbohydrate asheshayo aholela ekuzuzeni isisindo. Uma uthatha isinqumo sokulahlekelwa ngamakhilogremu ambalwa, ukwazi inkomba ye-glycemic ye-kefir yokuqukethwe kwamafutha ahlukile kuzosiza kakhulu, ngoba lo mkhiqizo ungomunye wabantu abadumile phakathi kokulahlekelwa isisindo.
Ngabe i-kefir ivunyelwe kwabanesifo sikashukela?
Njengoba ososayensi bethole, inkomba ye-glycemic ye-1% kefir, kanye namafutha amaningi, kunalokho iphansi, ngakho-ke lo mkhiqizo ulusizo kakhulu ekusetshenzisweni kohlobo 1 lwesifo sikashukela. Uma ubhekisisa noma yikuphi ekudleni kweziguli ezinesifo "esimnandi", uzokwazi ukuthi imikhiqizo yobisi omuncu isetshenziswa ngaphakathi kwayo. Eqinisweni, izazi zokudla zikholelwa ukuthi i-kefir ayigcini nje ngokukhulisa izinga likashukela egazini, kodwa iyakwazi ukwehlisa. Lokhu kungenxa yokuthi ama-bacteria obisi amuncu anomthelela ku-activation ekukhiqizweni kwe-insulin ye-hormone. Ngakho-ke uma unesifo, ungaphuza lesi siphuzo ngomuntu ozolile futhi ungakhathazeki ngokuthi hlobo luni lweshukela legazi. Khumbula nje: uma uhlose ukuthatha izivivinyo zikashukela, kufanele ungafaki ekudleni ngosuku olungaphambi kwenqubo, ngoba kungathinta umphumela.
Manje mayelana nokuthi iyiphi inkomba ye-glycemic ye-kefir ingu-3.2%, 2,5%, 1% namafutha aphansi. Kuyaqapheleka ukuthi empeleni akuguquki ngokuya ngenkomba. Ngakho:
Inkomba ye-glycemic yokuqukethwe kwamafutha kefir 3.2 ngamayunithi ayi-15. Le nkomba imaphakathi ngokuhlobene nemikhiqizo yobisi. Kuyafana ne-ryazhenka.
Inkomba ye-glycemic yamafutha we-kefir 1-2,5% iyefana. Ilingana amayunithi ayi-15. Ukuphuza okunjalo kuzoba wusizo kokubili ekulahlekelweni ngabantu abanesisindo nakwisifo sikashukela.
Ngokwemithetho ekhona, kuyasiza ukudla ukudla okune-GI engaphansi kwama-50 amayunithi, ngakho-ke ungasebenzisa ngokuphepha i-kefir ngenani elijwayelekile ngaphandle kokwesaba impilo engeyinhle.
Ngaphezu kwenkomba ye-glycemic ye-kefir, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi hlobo luni lokuqukethwe komkhiqizo onikezwe. Le nkomba yesiphuzo incane kakhulu: ngama-30-50 Kcal kuphela amagremu ayikhulu omkhiqizo, ngokuya ngokuqukethwe kwawo amafutha. Ngaphezu kwalokho, ngenani elincane lamakhalori, i-kefir inesakhiwo esikhulu sokudla okunempilo, okubandakanya amavithamini namaminerali ahlukahlukene, awusizo kakhulu emzimbeni womuntu futhi adingekayo ukuze usebenze ngokujwayelekile.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ngaphezu kwenkomba ephansi ye-glycemic yamafutha we-kefir 2,5%, lesi siphuzo sinosizo olukhulu phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela ngenxa yokwakheka kwazo okuhle futhi okuhlukahlukene. Kuyo ungathola amavithamini eqembu D, awusizo kakhulu emzimbeni, asiza umzimba ukuthola i-calcium, esiza ukuqinisa amathambo. Lezimbiwa zibaluleke kakhulu phambi kwesifo sikashukela sohlobo 1, ngoba kulesi sifo kuvame kakhulu ukuthi uphawu oluhambisanayo lubhekane nokuqhekeka nokwelashwa kwabo okude ngenxa yomzimba olungafanele.
Ngaphezu kwalokho, ungathola amanye amavithamini awusizo kulo: A, PP, C, iqembu B ne-N. Phakathi kwezimbiwa, i-calcium, potassium nensimbi kugqame kakhulu.
Izici eziwusizo ze-kefir
I-Kefir ingumkhiqizo osiza kakhulu ozibonakalisa kahle ikakhulukazi uma kunesisindo ngokweqile. Njengoba wazi, kuthuthukisa ukukhiqiza ujusi wesisu, ngakho-ke umgudu wokugaya ukudla uqala ukusebenza ngejubane elisheshayo. Yingakho izazi zezempilo ezivame ukucebisa ukuphuza ingilazi ye-kefir ngemuva kwesidlo sakusihlwa, ukuze ungagcini nje ngokuondla umzimba, kodwa futhi ungalimali ipheshana lesisu.
Ngaphezu kwalokho, i-kefir iqukethe inani elikhulu kakhulu lamaprotheni ezilwane, umzimba omunca kalula kunalawo atholakala enyameni noma enhlanzi. Lokhu kungenxa yokuthi isiphuzo sinomvubelo ophakathi, osiza umsebenzi wamavithamini we-B nama-amino acid abandakanyeka ekudleni kwamaprotheni.
Konke lokhu kuholela eqinisweni lokuthi ukusetshenziswa njalo kwengilazi eyodwa ye-kefir ngosuku kunikeza ukuphuculwa kwamapheshana emathunjini, kusheshise imetabolism futhi kuqinise namathambo.Ososayensi babuye bathola ukuthi isiphuzo sinamandla okuhlanza umzimba ngemikhiqizo ebolile eyingozi, okungukuthi, ubuthi.
Izinzuzo ze-kefir zabanesifo sikashukela
Lapho kukhona uhlobo 2 lwe-mellitus yesifo sikashukela - ikakhulukazi isikhathi eside - iziphazamiso zivame ukuvela emsebenzini wesibindi kanye nesinye. Kulokhu ukuthi kuzoba usizo kakhulu ukuqala ngokuphuza i-kefir njalo, ngoba lo mkhiqizo ungaba indawo enhle yokwelapha yalezi zifo. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukwenza umsebenzi wesistimu ube nokujwayelekile, uqinise izicubu zomzimba eziphelelwe amandla.
Futhi-ke, akumelwe sikhohlwe ukuthi i-kefir iyakwazi ukwehlisa izinga loshukela wegazi noma ngabe iphakeme kakhulu. Manje kumithi yesintu, ungathola izindlela ezimbalwa zokuphuza ezisuselwa ku-kefir, ezisiza ukunqoba isifo sikashukela futhi zithinte ukumelana nomzimba kwe-insulin.
Ngaphandle kokuthi inkomba ye-glycemic ye-kefir "Biobalance", "Prostokvashino" nezinye izinhlobo zobisi ziphansi impela, lokhu akusho ukuthi zingasetshenziswa yiwo wonke umuntu. Yize isiphuzo singenazimpikiswano eziningi kangako, zikhona kodwa zikhona, ngakho-ke, uma zikhona, kufanele wenqabe ukusebenzisa umkhiqizo owaziwa kakhulu wobisi. Akunakusho ukuthi kufanele uphuze i-kefir uma kunezinkinga ezihambisana nokukhuphuka kwe-acidity yesisu. Lokhu ngeke kusize kuphela ukubhekana nesifo sikashukela, kodwa futhi kuzodala ukukhubazeka kwamathumbu emathunjini. Kungakuhle futhi ukuphuza ngokucophelela ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba akunakwenzeka ukubikezela ngokunembile ukuthi umzimba ungasabela kanjani emkhiqizweni wobisi obilisiwe lapho kukhona ingane eyi-fetus nesifo sikashukela ndawonye.
Naphezu kweqiniso lokuthi i-kefir isakazeke kulo lonke elaseRussia amakhulu eminyaka, inani elincane labantu liyakwazi ukuphuza lesi siphuzo ngendlela efanele. Ukuze uzibone ngokuphelele i-gamut yokunambitha, kufanele unamathele kule mithetho elandelayo:
Phuza isiphuzo kufanele sifudumale, mayelana nokushisa kwekamelo. I-kefir efudumele kakhulu noma ebandayo ilahlekelwa yi-acidity ethile eyenze yathandwa kakhulu. Ukufinyelela izinga lokushisa olifunayo, udinga nje ukukhipha umkhiqizo esiqandisini cishe isigamu sehora ngaphambi kokuwusebenzisa.
Umthamo wansuku zonke we-kefir kumuntu ojwayelekile akufanele udlule ku-500 ml. Kungcono ukuyihlukanisa izingxenye ezimbili, ukuphuza ingilazi ekuseni nakusihlwa ngaphambi kokulala. Ngakho-ke, ungaba nomphumela omuhle kakhulu esiswini, usebenze umsebenzi wawo.
Kubantu abaningi, i-kefir ibukeka ine-acidic, futhi ngenxa yalokho bengeza ushukela ukuthambisa ukunambitheka. Akunakuphikwa ukuthi abantu abanesifo sikashukela bangakwenza lokhu: lokhu kuzokhulisa kakhulu inkomba ye-glycemic, okwenza i-kefir ibe yingozi kubo.
Kwabanesifo sikashukela, odokotela bavame ukutusa ukuxuba i-kefir neminye imikhiqizo. Okuthandwa kakhulu yi-buckwheat, isinamoni, i-apula nojinja. Ngaphambi kokungezwa ekudleni, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuthola imiphumela engaba khona.
Manje kunoma iyiphi i-hypermarket enkulu ungathola kalula amashalofu ngokudla okunempilo, okunconyelwe abathengi besifo sikashukela. Kodwa-ke, i-kefir kwesinye isikhathi ayinakwenzeka ukuyithola lapho, ngoba inkomba ye-glycemic kumaphakeji, njengomthetho, ayinqunyelwe. Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi lesi siphuzo sisezingeni eliphansi impela, futhi ngenxa yalokho, uma sidliwe ngenani elibekiwe, kuzosiza ukwehlisa ushukela wegazi futhi ngeke kukwenze nakancane ukulimala kwesibalo.
Ngakho-ke ungawukhetha ngokuphepha umkhiqizo onekhwalithi wanoma yikuphi okuqukethwe okunamafutha esitolo, konke okufanayo, inkomba yayo ye-glycemic izoba ngaphansi kuka-50. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi akunakwenzeka ukufaka amanzi nge-kefir (naphezu kweqiniso lokuthi ingamanzi). Esimweni sikashukela, kubaluleke kakhulu ukulondolozela ibhalansi lamanzi elifanele, okungukuthi, uphuze okungenani amalitha ama-2 amanzi angahlanzekile ngosuku.
Inkomba ye-glycemic ye-ryazhenka
Lapho kukhona ushukela wegazi ophakeme, umuntu uphoqelekile ukuba akhethe ukudla neziphuzo ezine-index of kufika ku-50 PIECES. Ukudla okunjalo kuzokwakha ukudla okuyinhloko. Ukudla okunezinkomba kuze kufike kumayunithi angama-69 kungeniswa ekudleni ngezikhathi ezithile kuphela, ngaphandle kwalokho, kungabi ngaphezu kwezikhathi eziningana ngesonto.
Kubalulekile futhi ukuthi ubheke okuqukethwe kwekhalori kwemikhiqizo. Ukudla okunye, ngenxa yokuthi akuqukethe i-carbohydrate, kunenkomba yamayunithi we-zero. Kodwa-ke, kaningi ukudla okunjalo kuphezulu kumakhalori futhi kuqukethe i-cholesterol embi. Futhi, kukhuthaza ukwakheka kwamakhemikhali e-cholesterol, futhi ngenxa yalokho - ukuqhekeka kwemithambo yegazi. Lesi sifo sitholakala kakhulu kwisifo sikashukela.
Cishe yonke imikhiqizo yobisi iyamukeleka ekudleni kwesiguli, futhi ubisi olubilisiwe lubhakiwe. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yendlela yokulungiselela kwayo, iqukethe amavithamini namaminerali amaningi awusizo.
Ezikhiqizweni zobisi, phambi kohlobo lwesibili sikashukela, okulandelayo kuvunyelwe:
Isimo sansuku zonke esinconywe yi-endocrinologists isiphuzo sobisi esimuncu noma ubisi akufanele singeqi ama-millilitha.
Inkomba ye-glycemic ka-ryazhenka amayunithi angama-30, inani le-calorific ngamagremu ayi-100 womkhiqizo angama-57 kcal.
Izinzuzo zobisi olubilisiwe olubisiwe
URyazhenka wangena ekudleni kwabantu ngekhulu le-17. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuthandwa kwayo kwehle ngandlela thile, ngenxa yobuningi bokukhethwa kwemikhiqizo yobisi. Kepha bambalwa abantu abaziyo ukuthi ubisi olubilisiwe olubhakiwe lwenziwe ngobisi olubhakwe ngokugungqa kuhhavini okushisa afinyelela ku-95 C.
Ngenxa yokuhwamuka koketshezi olwedlulele, lo mkhiqizo wobisi uqukethe inani elikhulu lamavithamini namaminerali. Lokhu kubaluleke kakhulu kubantu abanesifo "esimnandi", ngoba abakwazi ukuthola izakhamzimba ezingene emzimbeni.
I-Ryazhenka iyi-antioxidant yemvelo elwa ukuba khona kwezinto ezinobuthi emzimbeni. Kubantu abajwayelekile, uvame ukubizwa ngokuthi "umsizi we-hangover."
Ngenxa yezakhiwo zayo ezibalulekile, ubisi olubilisiwe olubilisiwe. Ngokusetshenziswa kwayo njalo, kwandisa ukumelana komzimba ezifweni kanye namagciwane e-etiologies ahlukahlukene, okungukuthi, kuqinisa amasosha omzimba.
Ososayensi bathole ukuthi ubisi olubilisiwe oluhanjisiwe luyindlela yokuvimbela ekuthuthukisweni kwe-atherossteosis, i-osteoporosis, kanye ne-hypertension. Ngokungahambi njalo emgudwini wesisu kanye nohlelo lokugaya olunolaka, odokotela batusa ukuphuza ingilazi yalo mkhiqizo obisi obilisiwe. Umphumela wokwelapha utholakala ngenxa yokuba khona kwe-lactic acid.
Izinzuzo ezingeziwe zobisi olubilisiwe olubisiwe:
ukuphuza ingxenye encane yesiphuzo (amamililitha ayikhulu), umuntu amahora amaningi aqeda indlala,
uma ngemuva kokudla “usizi” uzwakala esiswini, ungaphuza uhhafu wengilazi yobisi olubilisiwe futhi ngesikhathi esifushane kuzoba nokukhululeka,
iqinisa izinwele, izipikili namathambo, futhi ithuthukise nesimo sesikhumba.
URyazhenka uqeda ngokuphelele ukoma, okubaluleke kakhulu ezinsukwini ezishisayo. Ngemuva kwakho konke, ukuphuza ngokweqile ngokweqile kungavusa ukubukeka kokuvuvukala.
Ungalusebenzisa kanjani ubisi olubilisiwe olubhakwe
Ubisi olubilisiwe olubhakwe lungasetshenziswa njengokudla okugcwele, ngokwesibonelo, njengesidlo sokudla noma isidlo sokugcina, noma ukugcwalisa ukunambitheka kwalo ngezithelo namajikijolo ahlukahlukene. Lesi sidlo sesivele sibizwa ngokuthi i-smoothie.
Kubalulekile ukuba abanesifo sikashukela babheke ukuthi izithelo ezincane ozikhethayo, zehlisa i-GI yabo. Okusho ukuthi, inkomba ye-puree yezithelo izophakama kakhulu kunaleso sithelo sonke. Yize le nkomba ihluka kancane.
Isimo ngamajusi sihluke kakhulu. Zenqatshelwe ngokuphelele kubantu abanoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, ama-milliliters we-150 wejusi kuphela angakhipha ukugxuma okubukhali kushukela wegazi ngo-4-5 mmol / l.
Ubisi olubilisiwe olubhakiwe lungahlanganiswa nezithelo ezinjalo, uzigaye ngokusebenzisa ngesihlungo noma ngokunquma ku-blender:
zonke izinhlobo zezithelo zamawolintshi - ulamula, ulamula, owolintshi, i-mandarin, i-grapefruit.
Kwamajikijolo, ungakhetha okulandelayo:
Ukunambitha, isinamoni, ushukela obambele, isipuni soju noma amahlumela we-melissa afakiwe ku-smoothie. Uma ubisi olubilisiwe lubhakelwe isidlo sakusihlwa, khona-ke kufanele lwenzeke okungenani amahora amabili ngaphambi kokulala. Ngezansi kunemenyu yansuku zonke ekhombisa ngokufakwa kwe-ryazhenka ekudleni.
Imenyu eyisampula yosuku:
kwisidlo sasekuseni sokuqala, kungcono ukunikela izithelo ukuze ushukela ongena egazini amungene ngokushesha ngenxa yokuzivocavoca umzimba. Amagremu ayi-150 ama-sitrobheli kanye nama-gramu ayi-100 we-cottage shizi kuzoba isidlo esihle ngokuphelele.
isidlo sasekuseni sesibili siqukethe i-oatmeal ebilisiwe emanzini, ngokufakwa isipuni soju lwolen kanye nama-walnuts ambalwa.
kuyadingeka ukuthi ukhonze izitsha eziningana kwasemini, enye yazo iluketshezi. Isibonelo, isobho semifino nocezu lwenkukhu ebilisiwe, inhlanzi esikiwe, isithelo esenziwe ngesihlahla esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isaladi yemifino nocezu (amagremu ama-20) wesinkwa rye, itiye eliluhlaza.
ukudla okulula kungukudla okuphakathi nendawo okufanele kube phansi kilojoule. Isibonelo, ingilazi yekhofi enokhilimu ongafinyelela kuma-15%, ucezu lwesinkwa rye noshizi we-tofu.
ekudleni kokuqala, ungahluza isiguli ngokwenza iklabishi le-schnitzel labanesifo sikashukela ngokwe -resiphi ekhethekile, futhi ukhonze ama-meatballs enkukhu ngokufakwa kwelayisi elinsundu, itiye elimnyama.
Isidlo sokugcina siqukethe ama-milliliters angama-200 we-ryazhenka.
Ukulawulwa kweshukela ngokusebenzisa umsoco
Ukudla okhethwe kahle ngesifo sikashukela ezigulini ezinesifo sikashukela esinga-insulin kuyakwazi ukulawula amazinga kashukela egazini futhi kuvikele ukwanda kwezinkomba nengozi yezinkinga zesifo “esimnandi”.
Ngaphezu kweqiniso lokuthi udinga ukwenza ukudla kokudla neziphuzo ngenkomba ephansi kanye nekhalori yokuqukethwe, ungakhohlwa ngemithetho yokudla ngokwakho.
Kubalulekile futhi ukuthi ulondoloze ibhalansi yamanzi, uphuze okungenani amalitha amabili uketshezi ngosuku.
Imithetho eyisisekelo yokudla okunempilo ebusweni besifo "esimnandi":
udle ngezingxenye ezincane
inani lokudla liyahluka kusuka amahlandla ayisihlanu kuya kwayisithupha ngosuku,
kufanele uhlele ukudla kwakho ukuze okusanhlamvu nsuku zonke, imifino, izithelo, inyama noma inhlanzi, imikhiqizo yobisi ibe khona etafuleni,
yidla ngezikhathi ezithile,
kwenqatshelwe ngokuphelele ukuphuza utshwala, ngoba kwephula izinqubo ezithile ze-metabolic esibindini, okubandakanya ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia,
ushukela, ukubhaka, amaswidi, ukudla okusemathinini, inyama enamafutha nenhlanzi, isoseji, isaladi nokudla okuningi okune-GI ephezulu akufakiwe ekudleni,
ukudla kufanele kube yi-carb ephansi, futhi nokudla okuncane kwamafutha,
kuze kube yingxenye yokudla kwansuku zonke imifino emisha, eyakhiwe noma ebilisiwe.
Ukudla okhethwe kahle kuyisihluthulelo sempumelelo ekulweni noshukela ophezulu. Kepha lena akuyona ukuphela kwendlela yokuthonya ukwehliswa kweglucose yegazi. Futhi ama-endocrinologists emhlabeni wonke ancoma ukwelashwa kokuzivocavoca nsuku zonke kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ividiyo ekulesi sihloko ikhuluma ngezinzuzo ze-ryazhenka.